पहिलो विकेन्डमा ‘बाहुबली टु’ ले कमायो ४ सय ५० करोड
एजेन्सी बैशाख १८ – ‘बाहुबली टु’ बाट निकै राम्रो कमाईको आशा पहिले नै थियो । यो पनि निश्चित थियो कि फिल्मले थुप्रै रेकर्ड बनाउनेछ । तर तीन दिनमा नै फिल्मले अनुमान गरिएको रेकर्ड तोडेको छ । रिलिजपश्चात् बाहुबली टुको निकै धमाकेदार कमाईको सिलसिला आइतबारसम्म चलिरह्यो । पहिलो विकेन्डसम्म फिल्म बक्सअफिसमा ४ सय ५० करोड कमाइसकेको [&helli..
कति पुगिन् अप्सरा अभिनेत्री संचिता ?
काठमाडौं, बैशाख १८ – नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी ‘अप्सरा’ अर्थात अभिनेत्री संचिता ल..
पूजाले २ घन्टा कुराउँदा सुदर्शनलाई छटपटी
काठमाडौं, बैशाख १८ –अभिनेत्री पुजा शर्मा न त दर्शकमा धेरै क्रेज भएकी अभिनेत्री ह..
सयौं एपिसोडमा कपिलले नाम नलिएपछि सुनिल ग्रोवरको यस्तो प्रतिक्रिया
एजेन्सी बैशाख १८ – ‘द कपिल शर्मा शो’ मा डा. गुलाटी र रिंकु भाभीको भूमिकाबाट चर्च..
गीत संगीत मौलिक हुनुपर्छ –गायक प्रेमध्वज प्रधान
काठमाडौं, बैशाख १८ – बरिष्ठ गायक प्रेमध्वज प्रधानले नेपाली गीत मौलिक हुनुपर्ने ब..
बाहुबलीका ‘भल्लालदेव’ को खुलासा, ‘एउटा आँखाले देख्दिनँ’
एजेन्सी बैशाख १८ – ‘बाहुबली’ का भल्लालदेव आजकाल चर्चामा छन् । फिल्ममा राणा दग्गूबाती मस्कुलर लुकमा देखिएका छन् तर रियल लाइफमा पनि उनी कम बलिया छैनन् । वास्तवमा राणाले आफ्नो एक अन्तर्वार्तामा आफ्नो एक आँखाले काम नगर्ने बताएका छन् । उनी आफू एक आँखाले अन्धो भएको स्विकारेका छन् । राणा केही समयअघि एक प्रेरणादायी तेलुगु […]
विक्रम भट्टको खुलासाः सुष्मितासँगको सम्बन्धका कारण वैवाहिक सम्बन्ध टुट्यो
एजेन्सी बैशाख १८ – सुष्मिता सेनसँग कुनै बेला बलिउडका चर्चित निर्देशक विक्रम भट्टको सम्बन्धको ठूलै चर्चा थियो । एक अन्तर्वार्तामा ‘गुलाम’ फिल्मका निर्देशकले आफ्नो सम्बन्धबारे स्विकारेका छन् । विक्रम भट्टका अनुसार पूर्व मिस युनिभर्ससँग उनको सम्बन्ध थियो र उनीसँगको सम्बन्धले उनको विवाह टुट्नुको कारण थियो । स्मरण रहोस्, विक्रम भट्टल..
किड क्विन नेपालले देखाए ट्यालेन्ट
काठमाडौं, बैशाख १७ – १५ औं किड क्विन नेपाल–२०१७ का प्रतियोगीहरुले आफुमा रहेको ट्यालेन्ट देखाएका छन् । उनीहरुले नृत्य, गायन, अभिनय, बतृत्वकला जस्ता प्रतिभा प्रस्तुत गरेका हुन् । बहुसँख्यक प्रतियोगीले नृत्य देखाएको प्रतियोगितामा २७ प्रतियोगी छन् । ट्यालेन्ट शोको निर्णायकमा गायिका एवं सञ्चारकर्मीद्धय धन लामा, राज्यलक्ष्मी शाक्य, पू..
बर्गर पछि अब साडीमा चढ्यो बाहुबलीको रंग
एजेन्सी बैशाख १७ – फिल्म ‘बाहुबली’ आजकाल हरेकको मन मस्तिष्कमा बसेको छ । जसले पनि यही फिल्मको चर्चा गरिरहेको देख्न सकिन्छ । यही ‘चार्म’ लाई ध्यान दिएर भारतमा ‘बाहुबली’ विशेष खाना तयार गरिँदैछ भने कतै विशेष बर्गर । तर अब ‘बाहुबली’ को रंग साडीमा पनि देख्न थालिएको छ । हो, ‘बाहुबली’ प्रिन्टेड साडी बजारमा निकै […]
रेशम र प्रमिलालाई मिस्टर र मिस हस्पिटालिटीको उपाधि
पोखरा, बैशाख १७ – मिस्टर एण्ड मिस हस्पिटालिटी नेपालको उपाधि स्याङ्जा वालिङका रेशम कुमाल र पोखराकी प्रमिला गुरुङले जितेका छन् । कुमालले ११ र गुरुङले प्रतिष्पर्धीलाई पछि पार्दै उपाधि चुमेका हुन् । एपि इन्टरटेन्मेन्टको आयोजनामा भएको प्रतियोगीताको विजेताले उपाधिसँगै ७५ हत्तर रुपैयाँ बराबरको पुरस्कार प्राप्त गरे । होटल बाटिकामा रेष्ट..
‘बोकेदाह्री’को अर्काे हर्कत ‘ल्वाङ्ग पिरो सुपारी चाम्रा’
काठमाडौं, वैशाख १७ – ‘बोके दाह्री’को नामबाट परिचित कमेडियन गायक श्रीकृष्ण लुईंटेलले अर्काे कमेडी गीत ‘ल्वाङ्ग पिरो सुपारी चाम्रो’ भिडियो सहित ल्याएका छन् । नेपाली समाजमा धार्मिक आस्था बोक्नेहरुले के काम गर्नुहुन्छ ,के गर्नुहुँदैन भन्ने जस्ता क्रियाकलाप प्रति ब्यङ्ग्य गर्दै यो गीत ल्याइएको हो । गीतको आकर्षक भिडियो पनि बनाइएको छ ।..
एयरपोर्टमा प्रेमीसँगै देखिइन् नरगिस, मीडियालाई देखेर यसरी लुकाइन् अनुहार
एजेन्सी बैशाख १७ – नरगिस फखरी, प्रेमी उदय चोपडासँग एयरपोर्टमा देखिएकी छिन् । दुबै एकैसाथ एयरपोर्टबाट बाहिर आइरहेका थिए । यसै क्रममा नरगिसले मिडियालाई देखेर स्कार्फले आफ्नो अनुहार लुकाएकी छिन् । तरपनि यी दुइलाई क्यामरामा कैद गरियो । पछिल्लो वर्ष मे महिनामा दुबैको ब्रेकअपको खबर सार्वजनिक भएको थियो । त्यपछि पहिलो पटक यी दुईलाई सँगै..
सोहितले सामियासँग कार भित्र किस मागेपछि..
काठमाडौं, बैशाख १७ – चलचित्र ‘हिटलर’को ट्रेलर रिलिज गरिएको छ । १२ जेठबाट प्रदर्शनमा आउने यो चलचित्रको ट्रेलरमा सोहितले कार भित्रै सामियासँग किस मागेको दृश्य देखाइएको छ । सौरभ ढकालको निर्देशन रहेको चलचित्र यी दुइ पत्रको रोमान्स, प्रेम, विछोडमा आधारित छ । चलचित्रमा नायिका मेनुका प्रधान र ए गुरुङको पनि अभिनय देख्न सकिन्छ । [..
एलिसाको पुस्पलसँग यस्तो छ रोमान्स
काठमाडौँ, बैशाख १७ – चलचित्र ‘लुट २’को आइटम गीत ठमेल बजारबाट चम्किएकी मोडल एलिसा राई अभिनित अर्काे भिडियो ‘किन तानेको मेरो पछ्यौरी….’बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । गीतमा एलिसाले मोडल पुष्पल खड्कासँग रोमान्स गरेकी छन् । नृपेश उप्रेतीका शब्द रहेको गीतमा चर्चित गायिका अञ्जु पन्त र गायक शिव भुषालको स्वर छ । भिडियो पत्रकार सुब्रत..
प्रथम ‘नेपाली तारा’ दीपकको जाली माया
काठमाडौं, बैशाख १७ –गायक दीपक लिम्बूको ‘जाली माया‘’ सार्वजनिक भएको छ । प्रथम ‘नेपाली तारा’ समेत रहेका दीपकको ‘जाली माया’ बोल गीत भिडियो सहित सार्वजनिक भएको हो । गायक तथा संगीतकार उत्तमजंग लिम्बूको शब्द÷संगीत रहेको ‘किन लाउँछौं जाली माया’ भिडियोलाई युगल पोमु लिम्बूले निर्देशन गरेका हुन् । भिडियोमा गायक दिपकका अलावा मोडल पविता राई..
हिँडेर अमेरिका जाने कथामा दीपेन्द्रको नयाँ चलचित्र
काठमाडौं, बैशाख १७ –अक्सर निर्माता निर्देशक चलचित्रको सफलता प्रदर्शनको ५१ औं वा १०० औं दिन पार गरेपछि साट्ने गर्दछन् । तर दीपेन्द्र के खनालले आफ्नो पछिल्लो प्रदर्शनमा आएको चलचित्र ‘लभ लभ लभ’ सफल भएको खुसी तीन सातामै शेयर गरेका छन् । उनले शुक्रबार साँझ राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना सहित खुसी शेयर गरेका हुन् । कार्यक्रममा [&hell..
ह्वाट हाउस एसएलसी प्रिन्सेस २०१७ मा ४० प्रतियोगीहरु छनौट
काठमाडौं, वैशाख १७ – मिस ई कलेज, जुनियर स्कूल प्रिन्सेस्, मिस एयर होस्टेस् , मिस टिन कलेज कार्यक्रमको निरन्तरता संगै सिजन मिडिया प्रा.लि.ले एसइइ दिएर वसेका युवतीहरुमा केन्द्रित गरी विगत ८ वर्षदेखि निरन्तर रुपमा गर्दै आएको (ह्वाट हाउस एसएलसी प्रिन्सेस २०१७) नामक कार्यक्रमको पहिलो अडिसन आज काठमाडौंको कमलादी स्थित सिजन मिडियाको कार..
एजेन्सी बैशाख १६ – बहुप्रतिक्षित फिल्म ‘बाहुबली टु’ शुक्रबारबाट रिलिजमा आएको छ । धेरैले फिल्म हेरिसक्नु पनि भयो होला तर फिल्मबारे यस्ता विभिन्न जानकारी सार्वजनिक भएका छन् जुन फिल्ममा हेर्न पाइँदैन । फिल्म निर्माण र छायांकनका बेला घटित विभिन्न घटना एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक भइरहेका छन् । भारतीय मिडियासँगको कुराकानीको क्रममा फिल्म..
एजेन्सी बैशाख १६ – २४ वर्षीया कम्बोडियाली नायिका डेनी ननलाई अर्को एक वर्षसम्म नयाँ फिल्म बनाउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ । कम्बोडियाली सरकारका अनुसार मिस नन आवश्यकभन्दा बढि सेक्सी छिन् जसका कारण उनलाई प्रतिबन्ध गरिएको छ । कम्बोडिया संस्कृति र आर्ट मिनिस्ट्रिका अनुसार उनको फेसबुकमा राखिएको फोटोले आचार संहिताको उल्लंघन गरिरहेको छ । फेसब..
एजेन्सी बैशाख १६ – संसारभरी ९ हजार स्क्रिनमा रिलिज भएको ‘बाहुबलीः द कन्क्लुजन’ भारतीय इतिहासको सबैभन्दा ठूलो फिल्म बन्नका लागि पूरा तयारी गरिरहेको देखिन्छ । ट्रेड एनालिष्टका अनुसार पहिलो दिनको कमाइले नै यो फिल्म सन् २०१७ को सबैभन्दा ठूलो फिल्म हुनेछ । अहिलेसम्म यो रेकर्ड शाहरुख खानको ‘रईस’ को नाममा छ । रइसले पहिलो दिन […]
दीपेन्द्र राई काडमाडौं, बैशाख १६– बाँच्न पाए हाँस्न सकिन्छ । हाँसेर बाँच्न चाहनेको कमी छैन । गायिका शकुन आङ्देम्बेले पनि त्यही र त्यस्तै सपना साँचेकी छन् । आफूले देखेको सपना विपनामा परिणत गर्न सार्थक जीवन बाँचेकी छन् । उद्देश्य प्राप्त गरेरै छाडिन्छ भन्दै रहरलाग्दो तरिकाले हाँसेकी छन् । कति लोभलाग्दो उनको जीवन । वैदेशिक रोजगारीम..
काठमाडौं, बैशाख १५ –अभिनेत्री करिस्मा मान्धरले अभिनेत्रीलाई पनि अभिनेताको सरह पारिश्रमिक दिनुपर्ने बताएकी छन् । रातोपाटी लाइभमा कुराकानी गर्दै उनले अभिनेत्री बिना चलचित्र अधुरो हुने उल्लेख गर्दे पारिश्रमिक पनि समान ब्यवहार गरिनु पर्ने बताएकी हुन् । १४ बर्षको उमेरबाट अभिनयमा रमाउदै आएकी उनीसँग चलचित्रको अभिनयका तितामिथा थुप्रै अन..
एजेन्सी बैशाख १५ – मुम्बई सेशन्स कोर्टले मोडल तथा नायिका प्रीति जैनलाई फिल्ममेकर मधुर भण्डारकरको हत्याको षड्यन्त्र रचेको आरोपमा तीन वर्षको जेल सजायँ सुनाएको छ । प्रीति जैनसँगै अदालतले दुई अन्य मानिसहरुलाई पनि यो मुद्दामा सजायँ सुनाइएको छ जबकी अन्य दुई व्यक्तिलाई सफाइ दिएको छ । सन् २००५ मा अण्डरवर्ल्ड डनबाट नेता बनेका अरुण गवलीला..
एजेन्सी बैशाख १५ – कटप्पाले बाहुबलीलाई किन मारे ? यो राजबाट आज पर्दा उठेको छ । एस.एस राजमौलीको फिल्म ‘बाहुबली टुः द कन्क्लूजन’ आज प्रदर्शनमा आएको छ । फिल्मको ३० सेकेन्डको दृश्य लिक भएको खबर पनि सार्वजनिक भइरहेको छ । यद्यपी, ३० सेकेन्डको भिजुअलमा फिल्मसँग जोडिएका यस्ता थुप्रै महत्वपूर्ण जानकारी लिक भएकोसमेत बताइएको छ । […]
काठमाडौं, बैशाख १५ –नयाँ बर्ष अर्थात ०७४ को पहिलो दिन बैशाख एक गते घम्साघम्सी रुपमा तीन चलचित्र ‘घामपानी’, ‘लभ लभ लभ’ र ‘राधे’ प्रदर्शनमा आए । नयाँ बर्षको बिजनेश आफ्नो पोल्टामा पार्ने उदेश्यले एक अर्काेसँग भिड्दै देखिएका यी चलचित्र कति सफल कति त्यो अन्तिम मितिसम्मको ब्यवसाहिक कलेक्सनले देखाउने छ । तर तीनै चलचित्रका मेकरले भने [..